Caafimaadka xiska maskaxda | Samfunnskunnskap.no
Cudurka maskaxdu wuu ku dhici karaa dadka oo dhan waqtiyo kala duwan noloshooda. Waxa jira sababo badan oo keeni kara inuu qofku qaado cudurka maskaxda. waxey noqon kartaa dhibaatooyin xagga nolosha ah xagga qoyska ah ama dhibaatooyin xagga shaqada ah. Marmarka qaarkood waxa keena marka aad dhibaato weyn la soo kulantay ama ku soo martay kadib, sida geerida, shil ama xaalad dagaal. Dadka qaar way dhaxlaan in cudurkaasi ku dhaco, diiqada (stress) ayaa noqon kartaa mid soo dedejisa cudurkaas.
Inta badan dadka u guura dal cusub waxey la kulmaan waxa loogu yeedho psykisk migrasjonsprosess. Mudada ugu horeysa noloshu wey fiicantahey, qofkuna wuu xiiseeyaa waanu jeclaadaa dalka cusub. Mudo kadib qaar badani waxey dareemaan niyad jab iyo wadanka cusub inay xumaan u qaadaan. Muddo ka dibna noloshu caadi ayey u noqotaa dadka badankooda.